Duqeymaha ciidanka Kenya oo Saameyn dhanka nolosha ah ku yeesh... | Universal Somali TV
Duqeymaha ciidanka Kenya oo Saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay shacabka gobolka Gedo
Shacabka ku dhaqan qeybo ka mid ah gobolka gedo ee ka tirsan Ismaamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxay heesta saameyn dhanka nolosha ah oo kaga timid ciidanka difaaca Kenya ee ku sugan Gobolkaasi.
Dadka ku nool deegaanada Miyiga ah ayaa sheegay in aysan awoodin xiligaan Isticmaalka taleefanka gacanta lagu qaato kaasi oo muhiim u ah xiligaan casriga nolosha bulshada Soomaaliyeed.
Dadka reer miyiga ayaa adeega ay ka doonayaan magaalada u adeegsada lacagta xawilaada taleefanka oo loo yaqaan (EVC) Plus taasi oo bilihii la soo dhaafay ay saameysay duqeynta ciidanka Kenya ay ku burburiyeen biraha shirkada Isgaarsiinta Hormuud.
Madaxda dowlada Fedaraalka ayay ugu baaqeen in ay waxka qabtaan xaalada nololeed oo ay wajahayaan oo u baahan in xiligaan wax laga Qabto.
Ciidanka Kenya ayaa marar badan lagu dhaliilay in si ula kac ay u burburiyaan Anteenada Isgaarsiinta ee Hormuud oo adeegeeda muhiim u yahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool koonfuurta bartamaha Dalka.
Madaxda shirkada Hormuud ayaa dhankooda walaac ka muujiyay waxaana ay tilmaameen in qasaare ba,an ay kala kulmeen ciidanka Kenya ee ku sugan Ismaamulka Jubbaland.
Kan-xigaShariif Shiikh Axmed oo dhaliil u soo...
Kan-horeDiyaarado gargaar wada maanta ka daga...
51,167,905 unique visits